YSX Trading Volume Topped K13 Billion in 2019
Govt denies large scale gold export/import
Patent Law to Come into Effect This Year
The Patent Law, passed in 2019, will take effect this year, said Dr. Moe Moe Thwe, deputy director general of the Intellectual Property Department, who was speaking atarecent patent law seminar. Over 200,000 patents have been registered with the Ministry of Commerce. Re-registration will be required once the...
Local, Foreign Firms Entitled to Dispute Settlement: Myanmar Competition Commission
Local, Foreign Firms Entitled to Dispute Settlement: Myanmar Competition Commission Both local and foreign-owned companies are entitled to seek Myanmar Competition Commission’s help in settlingadispute over unfair competition, U Than Maung, vice president of the commission, said December 27. Formed in 2018 following the enactment of Myanmar Competition Law,...
Myanmar keeps fishery industry running to safeguard supply
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ငါးရိက္ခာပြတ်လတ်မူမှရိစေရေး ငါးပုစွန်မွေးမြူရေးနှင့် ဖမ်းဆီး၊ ထုတ်လုပ်ရေးများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမူ ထိန်းချုပ်နေသည့် ကာလအတွင်း ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပ ငါးရိက္ခာပြတ်လတ်မူမရှိစေရေးအတွက် ငါးပုစွန်မွေးမြူရေးနှင့် ဖမ်းဆီးရေး လုပ်ငန်းများ၊ အအေးခန်းစက်ရုံများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် တည်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ကမ်းနီးကမ်းဝေး ငါးဖမ်းစက်လှေများ ဆိုက်ကပ်၍ ငါးတင် ၊ ငါးချသည့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့် ဆိပ်ကမ်းများရှိသည်။ အဆိုပါ ဆိပ်ကမ်းများမှ ဖမ်းဆီးရမိသော ငါး ၊ ပုစွန်များကို ပြည်တွင်းစားသုံးရန်နှင့် ပြည်ပ တင်ပို့ရောင်းချရန် လက်ကားစနစ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသည်။ ငါးပုစွန်များကို...
BEIJING, April 21 (Reuters) - The World Health Organization warned on Tuesday that any lifting of lockdowns to contain the spread of the novel coronavirus must be gradual, and if restrictions were to be relaxed too soon, there would bearesurgence of infections. Lockdown measures have proved effective, and...
Ministry Relaxes SME Lending Rules
Myo Sandar The Ministry of Planning, Finance and Industry has relaxed SME lending rules to allow small and medium enterprises with only one year’s track record to apply for loans. Prior to this, only SMEs with two or more years of track record were eligible to apply for loans. “We are planning...
A Bitcoin Spiral Review – How to Make More Money With This Exchange
This Bitcoin Cycle review is created with the goal of assisting you make more money with this exchange. While the internet site is easy to navigate, the switches and links are not user-friendly. It isagood idea to look over the...
YBS ကတ်စနစ်အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်၍ YRTA သို့ တင်ပြထား
ယာဉ်စီးခ ပေးချေရာတွင် အသုံးပြုမည့် YBS ကတ်စနစ်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်၍ ပြည်သူများ အမြန်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် YRTA သို့ တင်ပြထားလျက်ရှိကြောင်း YRTA မှ သိရသည်။ ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် Yangon Payment Service (YPS) စက်များ အဆင်ပြေမှုရှိမရှိနှင့် ပထမအကြိမ် ပြုလုပ်ထားသည့် Pilot Project တွင့် တွေ့ရသည့် လိုအပ်ချက်များနှင့် အခြား ဖြည့်စွက်မှုများပြုလုပ်၍ ဒုတိယအကြိမ် Pilot Project ထပ်မံရေးဆွဲကာ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်သူများအဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် YBS ယာဉ်လိုင်း ၁၉၀၀တွင် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှသာ ဒုတိယအကြိမ် Pilot Project သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး...
TOKYO Nintendo Co Ltd unveiled its first Japanese store in Tokyo's trendy Shibuya shopping district, inastep towards greater commercialisation of its cast of popular characters. The Nintendo Tokyo store in the fashion-focused Parco department store marks the latest move into the mainstream for Japan's gamer culture and gives Nintendo...
Whenarelationship reaches the center stage, Why More Polish Women Choose To Marry Foreignersacouple could question whether the relationship is actually worth conserving. They may dispute about insignificant things and consider divorce. The relationship has likely reachedatime of...